Kenya oo shuruud ku xirtay in ciidamadeeda ay kala baxdo Soomaaliya |
Kenya oo shuruud ku xirtay in ciidamadeeda ay kala baxdo Soomaaliya
Lataliyaha dhanka siyaasada ee wasaarada arimaha dibada dalka Kenya Zaddock Syong’oh oo la hadlay warbaahinta dalkasi ayaa sheegay in ciidamada Kenya ay Soomaaliya sii joogi doonaan ilaa ay ka xaqiijiyaan amaanka,sida uu hadalka u dhigay.
“Amaanka Kenya ee dhanka xuduuda ay la wadaagto Soomaaliya, waa mid la xiriira nabad iyo xasilooni ka dhalata dalka, sidaasi daraadeed ciidamada Kenya kama bixi doonaan Soomaaliya iyo degenaanta la xaqiijiyo”ayuu yiri la taliyaha dhanka siyaasada ee wasaarada arimaha dibada Kenya.
Dhanka kale lataliyuhu wuxuu sheegay in ujeedada ciidamada Kenya ay tahay xaqiijinta amaanka ee deegaanada Jubbaland,halkaasi uu ku sheegay inay tahay halkii laga soo abaabuli jiray weerarada lagu qaadayay dalka Kenya.
Zaddock Syong’oh, ayaa sidoo kale sheegay in dowlada Kenya aysan cid si gaar ah u taageereynin, sida uu hadalka u dhigay isagoo dhanka kale sheegay in amaanka Soomaaliya ay xaqiijin doonaan.
Ciidamada diowlada Kenya ee ku sugan magaalada Kismaayo ayaa waxaa lagu eedeeyay marar badan inay ka qeyb qaateen dagaaladii dhawaan ka dhacay magaalada Kismaayo, inkastoo dowlada Kenya ay beenisay arintaasi.
Ciidamada Kenya ayaa soo galay dalka Soomaaliya bishii October ee sanadkii 2011, si ay ula dagaalamaan Alshabaab, kadib markii afduubyo badan iyo dilka dalxiisayaal ah ka dhaceen dalka Kenya, iyadoo Kenya ay ku eedeysay arimahaasi ururka Alshabaab.